I-VW Tiguan iwubukhosi bemoto emgwaqweni
Fanelesibonge Bengu | January 17, 2022
IMOTO: VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI R-LINE
AYIKHO into ebuhlungu njengokwehlukana nento oyithandayo futhi usakujabulela ukuba nayo.
Kusuka ngasekuqaleni kukaDisemba, kuze kube yikuleli sonto, lukhule kakhulu uthando lwami lweVolkswagen Tiguan, ngoba ngihambe ngayo amahora angu-96:22 namakhilomitha angu-4 586 ngalesi sikhathi.
Ngibuyisela ukhiye emuva nje, angithandi ngoba kusemnandi ukutetemuka ngayo. Ibanga engilihambile lihlanganisa izindlela ezibheke eTugela Ferry eMsinga, endaweni yobumnandi entsha iKoneni Lifestyle, oLundi naseRichards Bay.
Emgwaqweni iwubukhosi futhi uma ufuna ijubane ulithola ngokushesha. Phela inenjini yeGolf GTI engu-2.0 TSI enamandla angu-162kW netorque engu-350Nm. Isuka ku-0 iye ku-100km/h ngemizuzwana engu-6.5 kanti ijubane elikhulu lingu-225km/h.
Uma ngithi ukuyizwa amandla mbijana, bengithanda ukuzishintshela igiya kumapedal shifter ngemuva kwesiteringi. Emakhoneni ayizwakali ukuthi yimoto enkulu futhi ephakeme ngoba iyalinamathela kwazise idonsa ngawo wonke amasondo.
Ukuphakama kuyasiza ukubona kahle umgwaqo phambili ukwazi ukuvika nemigodi egcwele emgwaqweni ongenela eMsinga. Nokuhamba ebusuku bekungayona inkinga ngoba inamaMatrix LED headlight akhanya sengathi yisemini. Uma kuqhamuka enye imoto amalambu avele afiphabale ngokwawo.
Inezinto ezimbalwa zokuphepha, uyakwazi ukusetha ijubane bese ihamba ngalo kuthi uma kunemoto ngaphambili, izinciphise isivinini. Ngesikhathi ifika nethangi eligcwele likaphethroli (60 litres) ngihambe amakhilomitha awu-633, futhi isengahamba amanye awu-40 ngaphambi kokuyetha. Ngaleso sikhathi ibiphuza amalitha angu-8.9 ngo-100km. Uma uyigcwalisa uhlukanisa nemali ewuR1 100.
Kulo 4 586km engiwuhambile, nokho ibisinyukile indlela edla uphethiloli, sekuwu-10.5l/100km.
Akuyona indlela ehamba ngayo ethandekayo ngayo kepha nangaphandle iyaheha, uma uyiwashe kahle iyabenyezela. Inkinga wukuthi inombala omnyama ngakho udinga inono ngoba uma like lana njengoba belenza nje, ivele isheshe ikuveze ukungcola.
Nokho uma ihlanzekile igqama ichrome egqize ngayo kwigrille nakubhamba ezansi, emawindini ezinhlangothini nasezicabheni kanjalo nakubhampa ngemuva. Namarimu ayo angu-20-inch nawo avele ahlale obala nobuhle bawo.
Ngaphakathi isikhala udedangendlale. Ilayisha abagibeli abahlanu futhi nebhuthi inkulu naphezu kokuthi kunesondo eliyisipele. Engikuthanda ngebhuthi ukuthi uyakwazi ukuyivula ngaphakathi, ngokhiye uphinde uyivale noma ngokushwiba unyawo ngaphansi uma uphethe impahla.
Uma ubona isikhala sincane, uyakwazi ukulalisa izihlalo ngemuva, futhi-ke bayengezele ngetowbar oyifihlayo, uyivule uma usuyidinga.
Izihlalo ziyisikhumba futhi ezangaphambili zihlelwa ngogesi.
Ngaphambili ine touchscreen infotainment system abayibiza ngeDiscover Pro with Wireless App Connect. Ngaphandle kokudlala umsakazo (okhala ezipikheni zeHarman Kardon) ukwazi ukuxhuma iselula nge-Apple CarPlay ngaphandle kokuxhuma intambo, ubona inkombandlela nemininingwane ngemoto nokunye. Phezu kwesiteringi kunedigital instrument cluster okwazi ukuyishintsha ukuthi ikuvezele kanjani izinto ezifana nejubane, uphethroli osele, inkombandlela nokunye.
Ezinye izinto enazo ukuthi ishaje iselula ngaphandle kwentambo, abashayeli bangemuva bayakwazi ukuzisethela amazinga okushisa, ipanoramic sunroof futhi iyakwazi nokuntsha imibala ekhanya ngayo ngaphakathi.
Isazoqhubeka nokwanda emgwaqweni iTiguan ngenxa yezinga eliphezulu layo.
2.0 TSI 162kW 4MOTION® DSG® R-Line - R720 700
Ifika ne-service plan yeminyaka emihlanu noma u-90 000km, i-warranty yeminyaka emithathu noma u-120 000km ne-anti-corrosion warranty yeminyaka engu-12.